नेपालमा अहिले शैक्षिक रुपमा कुनै आन्दोलनले बिद्यार्थी आन्दोलन को बिडो थामिरहेको छ भने त्यो चिकित्सा क्षेत्र भएको व्यापक अनियमितता र सुल्क वृद्धि बिरुद्धको अन्दोलंज नै हो ! मुर्झाएको बिद्यार्थी आन्दोलनलाई ब्युझाउने काम मनिष भट्टराई, प्रकाश चन्द, मान्यता थापा, कला अधिकारी लगायतले गरिरहेका छन् ! यो अभियानका सुरुवातकर्ता मध्यका एक गण्डकी मेडिकल कलेजमा तेश्रो वर्षमा अध्यन गरिरहेका मनिष भट्टराईसंग कान्तिपथकर्मी जेविन सर्वहाराको अन्तरबार्ताको सम्पादित अंश :
यतिबेला तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मुलुकमा रहेका नीजि मेडिकल कलेजभित्रका बेथिति विरुद्ध आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सर्वप्रथम एउटा आन्दोलनको अगुवाई हामीले ग¥यौ । त्यसपछि यसले अहिले देशव्यापी रुप लिएको छ । विभिन्न कलेजहरुमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि आवाज बुलन्द पार्ने काम भएको छ । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले यसको शुरुवात गरेका थियौं । आन्दोलनले एउटा उचाई हासिल ग¥यो । विभिन्न चरणमा वार्ता र सहमति भएपनि, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका सम्बन्धित निकायले ताकेता गरेपनि हाम्रो मुख्य माग कलेज प्रशासनले लिएको बढि शुल्क फिर्ता भएको छैन । आन्दोलनरत नै रहे पनि विद्यार्थी भएका नाताले हामीले छुटेको परिक्षा दिनुका साथसाथै पढाईलाई पनि कभर गर्नुपर्ने थियो । अब हामी यस आन्दोलनभित्र विगत देखि हालसम्म भएका गतिविधिलाई समीक्षा गर्दै बृहत् अन्तक्र्रिया, छलफल गरी अझ सशक्त आन्दोलन उठाउने तयारीमा हामी छौं । यो दुइतिहाइको सरकार, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालयहरु, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न विद्यार्थी संगठनले यसबीचमा खेलेका भूमिकालाई पनि हामी केलाउँदै छौं, गहिरोसँग मुल्यांकन गर्दैछौं ।
गण्डकी आन्दोलनको तपाईं सुत्राधार मानिनुहुन्छ,मेडिकल रिभोलुशनको एउटा बीउको रुपमा विद्यार्थीहरुले लिएपनि तपाईं नेपथ्यमै रहनुभयो नि, किन ?
गण्डकी मेडिकल कलेजबाट विद्यार्थी आन्दोलन त उठ्यो तर यसले कुनै निष्कर्षमा पु¥याउन सकेन नि ?
हो अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग पूरा भएको छैन । विद्यार्थीहरु संयमित भएर सहमति कार्यान्वयनको बाटो हेरेर बसेका हुन् । त्यसको मतलब अब विद्यार्थी सेलाए, आन्दोलन नै तुहियो, कलेज सञ्चालकहरुले फेरि आफ्नै मनोमानि लाद्ने स्थिति बन्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । ह्वाइट् एप्रोन आन्दोलनले मेडिकल विषय अध्ययन गर्ने संयमित विद्यार्थीहरु, पढाई आफ्नो प्रमुख एजेण्ड हो आन्दोलन होइन भन्नेहरु आज आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध सडकमा उत्रेर विद्रोहको आवाज ओकल्न सक्ने भएका छन् । यो नै गण्डकी आन्दोलनले लिएको ठिक दिशा हो । हो निष्कर्षमा भने पुग्न बाँकी छ । जहाँसम्म माग पूरा नहुँदै आन्दोलन मत्थर भयो कि, यसभित्र कुनै बार्गेनिङ, लेनदेन पो भएको छ कि भन्ने तपाईंको आशय हो भने म आव्हान गर्छु सबै साथीहरुलाई ढुक्क हुनुस्आम विद्यार्थीको हित विपरित यो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा टुंगिन एकदुईतीन दिइने छैन । आन्दोलनको एक चरण मात्र पार भएको हो ।
आन्दोलन नै विभाजित भएको भने पक्कै होइन । म त्यो मान्दिन । आन्दोलन दुइटा फ्र्याक्सनमा गएको छैन । तर आन्दोलन उठिसकेपछि वार्तामा बसेर पटकपटक सम्झौता भए तर कार्यान्वयन भएन । हाम्रै गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलन पछि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आएन । सरकारले त्यो लागु गराउन गम्भीरता देखाएन । त्यसले सरकारको रवैया प्रति स्वभाविक रुपमा आन्दोलनकारीले सरकार नै माफियाको चंगुलमा छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छँदैछ । विश्वास गर्ने बातावरण छैन । एकाथरी विद्यार्थी संगठनहरु पुरानासमस्या समेत गाँसिएकाले सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको जिकिर गरिरहेको तर त्यसलाई विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ नभएकोले सत्ताधारी निकट विद्यार्थी संगठनप्रति स्वतः अविश्वास सिर्जना भएको छ ।
आज एउटा न्यून वर्गका मजदुर किसानका छोराछोरीको त कुरै छाडौं मध्यम वर्गका परिवारले पनि चिकित्सा शिक्षा पढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहिर गएर एक करोड रुपैयासम्म रकम लिइएको छ । कमजोरभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका छोराछोरी बौद्धिक क्षमता भएर पनि मेडिकल शिक्षा पाउनुपर्छ । तर आज सरकारले तोकेको शुल्कमा नै पनि ९० प्रतिशत जनताले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन । आजको दिन मेडिकल कलेजहरुले लिने एक करोड रुपैयाको हाराहारी रकम तिरेर चिकित्साशास्त्र पढ्न सक्ने हैसियतमा १ प्रतिशत जनसंख्या पनि छैन जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि जग्गा जमीन धरौटी राखेर वा विक्री गरेर वा भ्रष्टाचारजन्य तरिकाले रकम आर्जन गर्न कतिपय अभिभावकहरु बाध्य हुनपरेको छ । सुशासनको कुरा यसमा जोडिएर आउँछ । तसर्थ सर्वसाधारणको पहुँचम मेडिकल शिक्षा हुनुप¥यो । सरकारी संयन्त्र, स्थानीय निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन सबैले यसका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुप¥यो ।
निजी मेडिकल कलेजका एकदुईजना सञ्चालकले सरकारलाई धम्की दिने, घुक्र्याउने, शिक्षा मन्त्री नै हटाइदिन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । त्यो सबै सुनेर लाचार बस्ने सरकार नै नालायकी हो भन्ने मलाई लाग्छ । मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गर्नु जरुरीछ । केहि वर्ष अघि शिक्षामा १८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाइएको थियो । त्यो नै अपर्याप्त छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका थियौं । अहिले त जम्मा ९ प्रतिशत बजेटमात्र शिक्षाका लागि छ । हाम्रो माग शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाइनु पर्छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनु नै पर्छ । त्यसो भयो भने मेडिकल शिक्षामा मात्र होइन पूरै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ । सरकारले मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन भनेर हौवा मच्चाइएको छ । त्यो वास्तविकता होइन । ती कलेजहरु राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि यी तमाम प्रकारका विकृति, मेडिकल मफियाका धाकधम्की र डरत्रासको अन्त्य भएर जान्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि कालु सिंह खत्रीले एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ऋण र चुक्ता पुँजीको आधारमा ६ अर्ब रुपैयामा हाल मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रिकरण गर्न सकिने बताएका थिए । त्यो ६ अर्ब रुपैया नपुग भएर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।
कशुल्क धेरै–थोरै भन्दा पनि सम्पूर्ण निजी कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले मुलुकको आवश्यकता निर्धारण गरेर सोहि संख्यामा सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिमा मेडिकल शिक्षा दिनुप¥यो । त्यसो भएमा मेडिकल शिक्षामा मात्र गुणस्तर प्राप्त हुने होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै गुणस्तर निर्माण हुन सक्छ । अहिलेको शिक्षाले प्रत्यक्ष असर कहाँ पारिरहेको छ त भन्दा स्वास्थ्य सेवा दिनदिनै अस्वाभाविक रुपमा महँगो हुँदै गइरहेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले ४२ लाख ४५ हजार वा करोडौँ रुपैया तिरेर शिक्षा लिन्छ भने उसले त्यो रकम उठाउनुपर्ने प्रेसर परिवार र समुदायबाट पाइरहेको हुन्छ । स्वाभाविक छ त्यो उसले विरामीहरुबाट उठाउन खोज्छ । आवश्यकता भन्दा बढि टेस्टहरु गर्न लगाउने, सेवामा लापरवाही हुने जस्ता घटना बढ्दै गएका छन् ।
हो डा. केसीको अनसनले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा उपलब्धी प्राप्त भएकै हो । उहाँको अनसन पछि बनेको शुल्क निर्धारण कमिटिले शुल्क तोक्ने काम ग¥यो । तर त्यो लागु भएन । तर डा. केसी एक्लैको आन्दोलनले नपुग्ने रहेछ । आन्दोलन त तिनले गर्नुप¥यो जो अन्यायमा परेका छन् । जो कि हामी विद्यार्थी । आफ्नो लागि हामी आफैं लड्ने वा अरु कसैले लडिदिए हुन्थ्यो भनेर बस्ने ? नीति त बन्यो तर कार्यान्वयन भएन । पीडित विद्यार्थी आफैंले आवाज बुलन्द नगरे कसले गर्ने । यो लडाईं हामी मेडिकल कलेज पढ्ने चारपाँच सय विद्यार्थीको मात्र होइन । यो तमाम नेपालीसँग जोडिएको लडाईं हो । त्यसैले डा. केसी एक्लैलाई मात्र यो जिम्मा दिने होइन । हामी सबै उठ्नुपर्छ ।
सरकारले निर्देशन दिन्छ, मन्त्रीमण्डलले निर्णय गर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो टुलुटुलु हेरेर सरकार मौन बस्छ । कुनै एक्सनमा जाँदैन । राज्यका निकाय देखेनदेखे झैं गरेर बस्छन् । मिडियामा विद्यार्थीहरुबाट फलानाफलाना कलेजले यतियति शुल्क बढि लिएको भने तोकेरै सार्वजनिक हुँदाहुँदै सत्ता हलनचल बसेको छ । यसले स्पष्ट पार्छ मेडिकल माफियाको चंगुल माथिसम्म छ । उनीहरुको सिण्डिकेट, मफियागिरी माथिदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म छ । त्यसविरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन । विधिको शासन नमान्ने, नीतिनियम नमान्ने, सरकार भन्दा माथि आफू छौं भन्ने माफिया सञ्चालकहरुलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर तुरुन्तः कारवाही हुनुपर्छ । तिनीहरुको कलेज खारेज गर्नुपर्ने हो, मुद्धा दायर गर्नुपर्ने हो या अन्य कानुनी कारवाही गर्ने हो त्यो गर्नुप¥यो । विधिभन्दा बाहिर मनोमानि गर्न उनीहरुलाई उन्मुक्त छाड्न भएन ।
छाती खोलेर संघर्षको मैदानमा हामी उत्रिन तयार छौं । विद्यार्थी साथीहरुलाई अब फेरि एक पटक टाउकोमा कफन बाँधेर आन्दोलनमा उत्रन तयार बस्नुस् भन्न चाहन्छु । आम जनसमुदायमा मेरो अपील के छ भने यो आन्दोलनलाई मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन त हो नि भनेर एक्लै नछाडिदिनुस् । यो ३ करोड नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न छ । यसलाई साथ समर्थन दिनुस् भनेर आव्हान गर्न चाहन्छु ।